Momba anay - Fujian Foen Aluminium Co., Ltd.
Fujian Foen Aluminum co., Ltd dia naorina tamin'ny taona 1988, izay ao amin'ny tanànan'i Fuzhou any Sina, dia ahitana faritra 1 333 000 metatra toradroa misy mpiasa 3500. 20% amin'izy ireo dia teknisianina mahay na injeniera. Mpanamboatra matihanina izahay any Chine namokatra ny mombamomba ny aluminium, machining aluminium, varavarankely aluminium sy varavarana varavarana, rindrina lamba ary rindrina bracket.
Izahay dia trano fonenana fandefasana bileta 5, foibe famolahana 1, tsipika fanitarana, zoro 4 anodized, 11 vovon-dasy vita amin'ny vovoka 11, tsipika vita amin'ny vovon-drongony 1, tsipika vita amin'ny hazo vita amin'ny 1 ary tsipika famokarana rano mafana; izay mahatratra 400.000 taonina ny vokatra azontsika isan-taona.
Izahay koa dia mamatsy ny CNC fanodinana sy milina ho an'ny profil aluminium, ao anatin'izany ny fahatapahana tsara, fikosoham-bary, ny fanenanana, ny fandefasana, ny takelaka fandikana, ny miondrika, ny lasitsy, sns .. Ny ankamaroan'ny fitaovana machining dia avy any Alemaina, Danemark;
Mandroso izahay raha mampiditra talenta zokiolona ary manana ekipa matihanina mahay amin'ny famokarana, teknolojia, fitantanana ary fandidiana. Nandritra ny ezaka nataonay nandritra ny taona maro dia nandalo ny rafitra 900 9001, ISO 14001 ary ny OHSAS 18001 ny rafitra fitantanana, nomena ny anaram-boninahitra hoe Famous Brand sy orinasa findramana any Shina.
Niorina manokana amin'ny fikatsahana ny lanja ambony indrindra amin'ny foto-kevitry ny 'laharam-pahamehana ambony indrindra ho an'ny mpanjifa, ny mpanjifa indrindra, ny serivisy mialoha ary ny fampindram-bola'. Isika dia tsy maintsy manorina orinasa kilasy voalohany ary marika fanta-daza amin'ny alàlan'ny fenitra avo lenta sy kalitao avo lenta.
Ny efitrano fampirantiana foen dia mampiseho serivisy vokatra marobe izay namolavola ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny toerana isan-karazany ara-jeografika sy fomba fananganana. mifantoka amin'ny varavarana fiarovana avo lenta sy Windows izahay. Nofehezina amin'ny fanidiana mihira ho an'ny filaminana bebe kokoa. Miaraka amin'ny hery ara-teknika matanjaka, ny teknolojia mandroso ary manana fitaovana be dia be, ny suite feno feno, anisan'izany ny varavarana sy ny varavarankely Bi-fold, ny varavarana mifono vy sy varavarankely, varavarana vita amin'ny Aluminum, varavarankelin'ny Awning sy Casement, Aluminum sy Glass Louvres, Fencing dobo. etc.